အမှတ် (၉) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း မော်လမြိုင်
အမှတ် (၉) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း မော်လမြိုင် (အ.ထ.က(၉) မော်လမြိုင်) သည် မော်လမြိုင်မြို့၊ ပန်းဘဲတန်းလမ်းတွင် တည်ရှိသောကျောင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်က ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း (Shin Maha Buddhaghosa National School) ဟု လူသိများသည်။
အမှတ် (၉) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
စိတ်ဓာတ်ကောင်းမြတ် ကျင့်ဝတ်လိုက်နာ လူရည်ချွန်များမွေးထုတ်ပေးရာ ထ ၉ ကျောင်းတော်သာ
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအသုံးပြုသင်ကြားလျက်ရှိသည်။ သူငယ်တန်းမှ ဒဿမတန်းအထိ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ဒဿမတန်းအောင်ချက်မှာ ပျမ်းမျှ ၇၅% ရှိ၍ မွန်ပြည်နယ်တွင် အောင်ချက်အကောင်းဆုံးအဆင့် ၁ မှ ၅ အတွင်း နှစ်စဉ်ဝင်ခဲ့သည်။
နှစ်စဉ် ဇွန်လမှ မတ်လဆန်းအထိ ပညာသင်ကြားရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သည်။ ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်ခြင်း၊ ဆွမ်းတော်ကြီးတင်ခြင်း၊ ဆွမ်းတော်ကြီးလောင်းလှူပွဲ၊ ပဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာ ဝတ်ရွတ်ခြင်း)၊ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများ (အမျိုးသားနေ့ ဈေးရောင်းပွဲ၊ စုံညီပွဲတော်၊ ကျောင်းနှစ်ပတ်လည် ပွဲများ)၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု (ဘင်ခရာတီးဝိုင်း၊ ပန်းပွားအဖွဲ့၊ အေရိုးဗစ်၊ အားကစားပွဲ) များကို နှစ်စဉ်ကျင်းပသည်။
ဂျီစီဘီအေ မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်လှိုင်၏ ဖခင် မော်လမြိုင်မြို့သစ်ကုန်သည် သူဌေး ဦးသာညှင်းက ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ငွေကြေး မ တည် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဝိုင်အမ်ဘီအေ (YMBA) ခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝအသင်း ကို စတင်တည်ထောင်သူ ဦးမေအောင် (၁၈၈၀ - ၁၉၂၆)က ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ် အဖြစ် ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသုံး မြန်မာ ရာဇဝင် ရေးသော ရာဇဝင်ဆရာ ဦးဘသန်း သည် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဖြစ် လုပ်ကိုင်စဉ် ဘီအေ မောင်ဘလွင် ဝတ္ထုကို ရေးခဲ့ပြီး ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မဟတ္တမ ဂန္ဒီ သည် ခွဲရေးတွဲရေး (ထိုစဉ်က မြန်မာပြည်သည် ဗြိတိသျှအိန္ဒိယပြည်၏ ပြည်နယ်တခုသာ ဖြစ်ခဲ့သည်) ကိစ္စအတွက် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပသော ညီလာခံ၌ မြန်မာလူထုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ ဦးဘသန်းဟု လူသိများသော ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ရ သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ဦးဘသန်း(၁၈၉၇- ၁၉၈၄) သည် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ အထက်တန်းကျောင်း၌ ပါဠိနှင့် မြန်မာစာဆရာအဖြစ် (၂၄)နှစ်တိုင်တိုင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။
သိပ္ပံမောင်ဝ - ခေတ်စမ်းစာပေကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ
သခင်စိုး - တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် နှင့် ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်‌ထောင်သူတစ်ဦး
သီရိပျံချီ ဦးစိန်ဝင်း - မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် (ပထမဆင့်)
စာရေးဆရာ ကုသ - ခေတ်စမ်းစာပေလှုပ်ရှားသူ နှင့် မော်လမြိုင် ဥပစာ ကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီး (၁၉၅၃ - ၁၉၆၃)
သီရိပျံချီ ဦးထွန်းမြင့် (လင်းခေး) - ၁၉၄၇ ခုနှစ် သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ချစ်ဆွေ (စာရေးဆရာနောင်စစ်သည်)- လယ်ယာနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီး၊ သမဝါယမဝန်ကြီး
ခေတ်စမ်းစာပေကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ သိပ္ပံမောင်ဝ သည် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲကို ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှ မြန်မာဘာသာနှင့် ပါဠိဘာသာ တို့တွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံမောင်ဝ သည် ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဓဃောသ ကျောင်းကြီးတွင် ပညာ သင်ကြားကာ နေသည့်အတွင်း၌လည်း မြန်မာဘာသာကို အထူးလေ့လာလျက် ဝါသနာအလျောက် "ဝဇီရာတင့်" ဟူသော အမည်နှင့် မြန်မာသတင်းစာများတွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသား ထည့်သွင်းခြင်း ပြုလေ့ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ခေတ်စမ်း ကဗျာများရေးသားသူ စာရေးဆရာ ကုသ သည် ၁၉၂၇ တွင် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသကျောင်းမှ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ အောင်ခဲ့သည်။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် အရေးပါသော ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ တွင်ပါဝင်ခဲ့သူ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသကျောင်းသား ကိုစိန်ဝင်း (နောင်တွင် သီရိပျံချီ ဦးစိန်ဝင်း) သည် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသကျောင်းမှ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူး အဆင့်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်မှူးဗထူး တို့နှင့် အတူ ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
The New Light of Myanmar ( Sunday, 21 November 1999)။ The New Light of Myanmar (21 November 1999)။ November 17, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
N. R. Phatak (1968). Source Material foraHistory of the Freedom Movement in India: pt. 1. Mahatma Gandhi (1915-1922). Government Central Press, India. p. 423.
ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်သမိုင်း(မော်လမြိုင်သမိုင်း). p. 114